सबैलाई डर देखाउने मृत्यु के हो र यो भयबाट कसरि मुक्त रहने? - Himalayamail.com
– डा. पुरुषोत्तम पौडेल
आफ्नै नजिकको आफन्तको देहान्त भए पछि र धेरै मानिसहरुको कोरोनाका कारण छोटो समयमा मृत्यु भएको कारण आज यसै बिषयमा लेख्ने मन भयो । मानिस लगायत कुनै प्राणी अजेय छैन । जन्मे देखि कुनै समय एउटा समयमा पुगेर प्राणीको मृत्यु हुन्छ । यो सत्य हुदा हुदै जुन सुकै समुदायमा किन नहोस् यसले सधै डर त्रास र आफन्त गुमाउदाको पिडामा रुने, भबुक हुने र लामो मानसिक तनावमा रहने गरेको पाईन्छ । यसले देह त्याग गर्ने त आफु बिचमा रहेनन् तर आफन्तहरु धेरै दुःख र पिडामा हुन्छन् ।
मानिसको मृत्यु पछि आफ्नै सामाजिक परम्परा अनुसार मृत्यु पर्यन्त संस्कार गर्ने प्रचलन छ । तर मुख्यरुपमा कोहिको देह डढाएर खरानी पार्ने, त कोहिको चिहानमा गाडेर अन्तिम संस्कार गरेको पाईन्छ । उत्तर एसियाका केहि साना समुदायमा भने मृत्यु भएको मानिसलाई काटेर चरालाई खुवाउने, किचनमा र ढोकामा गाड्ने आदि गर्ने गरेको पनि पाईन्छ । त्यस भन्दा पहिले र पछि आ-आफ्नै संस्कृति र परम्परा अनुसारका कर्महरु पनि गर्दछन् ।
अब चर्चा गरौ मानिसको मृत्युको । सामान्य तया मृत्यु भनेको जब मानिस श्वासप्रश्वास गर्न छोड्दछ, शरिरका अंगहरुले काम गर्न छोड्दछ, त्यस अबस्थालाई मृत अबस्था भनिन्छ वा मृत्यु भएको भनिन्छ । ओषधी बिज्ञानको अनुसार डा विलियम सि शैल मेडिसिन नेटमा भन्दछन्, शरिरका मुख्य अंगहरु: रगत संचार, मुटु, स्वासप्रस्वास, दिमाखले स्थाईरुपमा काम गर्न छोडे पछिको अबस्थालाई मृत्यु भनिन्छ । यो सर्वमान्य परिभाषालाई १९८० मा अमेरिकामा कानुनमा ब्यबस्था गरिएको थियो भनेकाछन् । डा सन्दिप जौहर दि न्युयोर्क टाईम्स (२०१९) मा लेख्छन् यदि रगत संचार भैरहे पनि मुटुले काम गर्न वा ब्रेनले काम गर्न छोडेमा मृत्यु घोषणा गर्न सकिन्छ । यो हार्बड कमिटिले निकालेको निश्कर्ष हो अहिले अमेरिका र धेरै देशहरुले यहि बिधिलाई प्रयोगमा ल्याएकाछन् । यो त भयो कानुनी तथा ओषधी बिज्ञानका मृत्यु सम्बन्धी तथ्यहरु ।
यस्तो मृत्युलाई आध्यात्मा वा धर्मले स्किार गर्दैन । ब्रेनले काम नगरे पनि कृतिम स्वास दिएर राखेको मानिस रक्त संचार भैरहदा छाम्दा तातो हुन्छ, त्यसैले परिवार र धार्मिक बिशेष गरि जुईसहरु ब्रेन मृत्युलाई स्विकार गर्दैनन्। डा सन्दिप जो आफै कार्डियोलोजिस्ट हुन् तर उनि आफै मृत्यु भनेको मानिसले बनाएको हो त्यसैले मृत्युलाई जैबिक, नैतिक र ब्यबहारिकरुपवाट मापदण्ड बनाउन पर्दछ भन्दछन् । धार्मिक मान्यताहरु शरिर क्षणिक र नासवान छ भन्दै आात्मालाई बढि महत्व दिएको देखिन्छ । जुन अमर हुन्छ भनेको पाईन्छ । तर बिज्ञान पुर्नजन्म वा मृत्यु पश्च्यात आत्माको अबस्था सम्बन्धमा मौन देखिन्छ ।
अब आध्यात्मिक पक्षहरुलाई पनि हेरौं । हिन्दु धर्ममा पनि जन्म, मृत्यु, कर्म र कर्मफल सबै मानिस जन्मनु भन्दा अघि तय हुने र समय समाप्त भएपछि यमराजले लैजाने गर्दछन् भन्ने बिश्वास रहेको पाईन्छ । मानिसको पुर्नजन्म पनि यस धर्मले स्विकार गरेकोछ भने मानिसको कर्मफल अनुसार ८४ लाख योनीहरुमा क्रमस जन्म र मृत्यु हुन्छ भन्ने बिश्वास गरेको पाईन्छ । यदि बिगत र बर्तमान जिबनमा शुद्ध वा पुन्य कर्म गरेको छ भने मानिस जन्म र मृत्युको चक्रवाट मुक्त भएर भगवान संग रहन्छ भनेकोछ । हिन्दु धर्मग्रन्थहरुमा भगवान बिष्णु पनि आफ्नो कर्मका कारण युग युगमा पुनर्जन्म लिएर दखी प्राणीहरुको लालन, पालन र रक्षा गरेका छन् भनिएको पाईन्छ । त्यस्तै ऋषिमुनी, राक्षसहरुको पनि पुनर्जन्म भएको, दलाईलामा र भगवान साईवावा मानिसकै रुपमा पुनर्जन्म भएको भनिएको छ । तर पुनर्जन्म भएकाहरुलाई भने अघिल्लो जन्ममा आफु को र कहा थिएं भन्नेमा चाहि संझना रहेको भने सिद्ध भएको छैन ।
अर्को तर्फ हेर्दा मृत्यु पश्च्यात आत्मा अदृश्यरुपमा रहने र आबधिकरुपमा श्राद्ध, पुजा र संझना गर्दा खुसी भएर दिबंगत आत्माहरुले आफ्ना बांचेका परिवारहरुलाई आशिर्वाद दिने र रक्षा गर्दछन् भन्ने बिश्वास पनि छ । आफ्ना मृत्यु भएका आफन्तको परिवार जम्मा भएर संझना गर्नु पित्रृ प्रतिको आदर र सम्मान प्रकट गर्दा पारिवारिकरुपमा शान्ती र सद्भाव बृद्धि हुन्छ । तर आत्माले कहिले अर्को प्राणी रुप धारण गर्छ वा पुर्नजन्म लिन्छ, जन्म लिईसकेको आत्मा वा परमात्मामा मिलेको आत्मा र श्राद्ध कर्म बिचको सम्बन्धमा के हो भन्ने प्रष्ट ब्याख्या र एकरुपता भएको देखिदैन ।
धार्मिक मान्यता र परम्परागत बिश्वासका आधारमा भन्न पर्दा मानिसले आफ्नो सबै कर्म र फल जन्मदा खेरिनै लिएर आएको हुन्छ । उसको कहिले र कसरी मृत्यु हुन्छ भन्ने कुरा पनि जन्म पहिले नै भाबीले तय गरेको हुन्छ भन्ने बिश्वास रहेको पाईन्छ । त्यहि अबधि मात्र उसले यस ब्रमाण्डमा भोग गर्दछ । तर यो बिषय भने कुनै तथ्यमा आधारित भएर स्थापित भएका भने छैनन् ।
कृष्टियन बाईबलले भन्दछ शारिरिक शरिरको अन्त्य मृत्यु होईन , आत्मा कहिले पनि मर्दैन, यो त भगवानसंगै वा छुट्टै रहिरहन्छ । मानव जिबन दुख, चिन्ता र रोगले भरिएको हुन्छ तर मानव शरिर त्याग गरे पछि यि सब वाट मुक्त हुन्छ । मानिसहरुको मृत्यु पछि आात्मा लाई भगवानवाट अटुट प्रेम मिल्दछ भनेकोछ । कोहि भगवनसंग स्वर्गमा वा कोहि पुन दुख, अधेरो र शत्रुततामा गईरहन्छन् । त्यसपछि ति चिन्ताले आत्तिएका आत्मा भगवान तर्फ फर्कन्छ। त्यसैले आत्माको अन्तिम गन्तब्य भगवान समक्षको उपस्थिति नै हो भन्दछ ।
ईस्लामको धर्मग्रन्थ कोरान अनुसार देबदुत आएर आत्मा लैजान आएपछि मानिसको मृत्यु हुन्छ । यदि मानिसले पापकर्म गरेकोछ भने उसको मृत्यु दुखद् हुन्छ र सत्कर्म गरेको छ भने मृत्यु वा आत्मा निस्कन सजिलो हुन्छ । मुसलमानहरु मृत शरिरलाई गाड्ने गर्दछन् । मृत शरिर गाडेपछि दुई देबदुत मुन्कर र नकिर आएर मृत आत्माको परिक्षण गर्दछन् र सतात्मालाई शान्ती र सुबिधा प्रदान गर्दछन् भने पापात्मालाई कष्ट दिएर सजाय दिन्छन् । जिबनलाई यस धर्मले भगवानको बरदान मान्दछ भने मृत्युलाई भय । यस धर्ममा आत्मा हत्या, बिरामी र अशक्तलाई मार्नु, र अन्यायपुर्ण तरिकावाट कसैलाई मार्नु बर्जित छ ।
बौद्ध धर्मले मृत्यु र पुनर्जन्म सम्सारा हो यो धेरै लामो चेन हो भनेकोछ । मृत्य पश्चात शक्ती परिबर्तन हुन्छ । राम्रो कर्म गर्नेले राम्रो पुनर्जन्म पाउछ तर नराम्रो कर्म गर्नेले दुखी जिबन प्राप्त गर्दछ । तर पुनर्जन्म मानिस, जिब र राक्षस सबै हुन सक्दछ भन्ने बिश्वास रहेकोछ । अत्यन्त राम्रो कर्म गर्नेले जन्म मृत्यु भोग्न पर्दैन त्यसलाई निर्वाणा वा मोक्ष भनिएकोछ ।
धर्म परम्पराहरुले मृत्युलाई दुई प्रकारमा राखेको देखिन्छ । कालगति र भबितब्य । रोग ब्याधि र शारिरिक अशक्तताका कारणको मृत्युलाई कालगतिमा राखेको पाईन्छ भने भबितब्यमा दुर्घटना आदि । तर यो अशान्त समाजमा अर्को तेस्रो प्रकारको मृत्यु अपराधिक र द्बेशपुर्ण मृत्युहरु अल्प संख्या र बृहत संख्यामा हुने गरेको पाईन्छ । मृत्युका कारण हेर्दा बिश्व स्वास्थ्य संगठनको (सन् २०००-२०१६ प्रक्षेपणको आधार) २०१८ अनुसार मृत्युका दश कारणहरु छन् भन्दै तिनलाई मुख्यरुपमा मानिसको मृत्यु तिन समुहमा बिभाजन गरेकोछ । जसमा सबै भन्दा बढि १. नसर्ने रोगहरु (मुटुरोग, स्ट्रोक, रक्त संचार अबरोध, अलजाईमर र डिमेन्सिया, छातीको क्यन्सर, र डाईबिटिज), २. न्युट्रिसन, प्रसुती र सर्ने रोगहरु (छातीमा संक्रमण, डायरिया, क्षयरोग र पौष्टिक आहारको कमी ) र ३.दुर्घटनाहरु पर्दछन् । यि मध्ये बिश्वमा बढि नसर्ने रोगहरुवाट मृत्यु हुन्छ भने न्युन आय भएका देशहरुमा सर्ने रोग सहितको समुहमा बढि मृत्यु भएको बताएकोछ ।
जो, जसरी मृत्यु भए पनि आफन्त र सत्कर्मवाट कमाएका ईष्टहरु दुखी हुन्छन् । आर्थिक र सामाजिकरुपमा आश्रित समाजमा त कसैको मृत्युले आश्रितको पनि जिबनमा ठुलो परिवर्तन ल्याईदिन्छ । तर स्वाबलम्बी समाजमा भने यसको प्रत्यक्ष प्रभाब कम हुन्छ । माया स्नेह अर्को बलियो साङ्लो हो जसले आफन्त वा आफुलाई कुनै कारणले मनपरेको मानिसको मृत्युमा दुखी र पिडित बनाउछ । मानिसको जिबन त एक बटुवाको जस्तै त हो । जिबन र परिवार वा आफन्त एक बटुवाले अरु बटुवालाई भेटे जस्तै, क्षण बिताए जस्तै, आफ्ना गन्तब्य वा पथ परिबर्तन पछि छुटिए जस्तै हो । त्यो बटुवाको भेटका क्षण लामो, छोटो, सुखमय र दुखमय सबै हुन सक्दछ । तर बटुवा आंफु त एक्लै हो । केहि मानिसहरु आफ्ना जिबनमा राम्रा कामहरु गरेका वा गर्ने अबसर पाएका हुन्छन् जसको मृत्यु भए पनि युग युग सम्म मानिसको संझनामा रहन्छन् । तर कोहि खराब काम गरेर अरुलाई दुख दिने काममा तल्लिन हुन्छन् । यस्ता मानिसहरु जिबितै भएपनि मानिसको ह्रदयमा पिडक र घृणित भएर रहन्छन् ।
बिज्ञानले हस्तक्षेप गर्न नसकेका धेरै प्राकृतिक पक्षहरुछन् । कति धर्म र मान्यता, पुर्वज, ऋषीमुनी र धार्मिक शास्त्रहरुले भनेका बिषयहरु बिज्ञानले क्रमस स्बिकार गर्दै आएकोछ भने कति बिषयहरु खुल्नै सकेका छैनन् । मृत्यु पश्च्यातको आत्मा र यसका गतिबिधिहरुको वारेमा बिज्ञान शुन्य छ । तर धर्म ग्रन्थहरुको तर्क केलाउदा प्राय सबै बहुसंख्यकले मानेका धर्महरुमा मृत्यु पश्चातको आत्मा, पुनर्जन्म, शान्ती, भगवानमा लिन आदिमा एकरुपता नै पाईन्छ । उहि वाटो मात्र अलिकति फरक जस्तो देखिन्छ । तर अन्य धर्महरुमा फरक हुन सक्दछ ।
त्यसैले मृत्य सत्य हो जुन आत्माले पार्थिब शरिर छोडेपछिको अबस्था हो । यसको मापन जैबिक, नैतिक र ब्यवहारिकरुपमा हुन जरुरी छ । मानिसका आफु जिबित छदाका कर्महरुले आफ्नो जन्म, मृत्यु र जन्मान्तरलाई दिशा निर्देश गर्दछ । त्यसैले यसमा भय भन्दा मृत्य पश्चात आत्मालाई कसरी शार्थक र शान्ती पथमा लैजाने भन्ने सोच यहि जिबनमा बनाउन पर्दछ । सत्मार्ग र सत्कर्मवाटनै मानिसले यस जिबनमा शान्ती र जिबन सन्तुष्टि दुबै प्राप्त गर्दछ भने मृत्यु पछि उपल्लो स्तरको जिवन र आत्माको सर्बोत्तम गुण प्राप्त गर्न सहयोग गर्दछ ।